हेर्नस्, अहिले दिउँसो के कहाँ बाटो अवरुद्ध छ ? - Everest Dainik - News from Nepal
हेर्नस्, अहिले दिउँसो के कहाँ बाटो अवरुद्ध छ ?
काठमाडौं, मनसुन सक्रिय भएपछि देशैभरिको जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । पहिरो र बाढीका कारण देशका कैयन स्थानमा बाटो अवरुद्ध बनेको छ । दर्जनौं सवारी साधन र यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् ।
ट्राफिक प्रहरीका अनुसार, अहिले दिउँसो साढे १२ बजे देशैभरीको अवस्था यस्तो रहेको छ ।
मकवानपुरको ईन्द्रसरोवर गाँउपालीकाको वडा नम्बर २ र ३ का विभिन्न स्थानमा झरेको पहिरोका कारण सिस्नेरी र फाखेल हुदै फर्किङबाट हेटौडा तर्फ जाने र आउने सवारी साधनको आवात जावत पुर्ण रुपमा प्रभावित भएको छ ।
सिराहाको मिचैया नगरपालिका ७ चुरेमा आज विहान खसेको पहिरोल सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ ।
महोत्तरीको भब्सीखोलामा बनाइएको डाइभर्सनमा पानीको बहाव बढ्दा आज बिहान ४ बजे बाट पुर्व पश्चिम राजमार्गमा चल्ने सवारी साधनको आवतजावत बन्द भएको छ । महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका १ र ४ लाइ जोड्ने भब्सीखोलाको पुल गत २७ गतेको बाढीले बगाएको थियो । विकल्पको रुपमा बनाइएको डाइभर्सनमा समेत पानीको बहाव बढेकाले सवारी आवात जावत बन्द भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दिबासले जनाएको छ ।
याे पनि पढ्नुस वर्षाको सम्भावना कायमै, ७८ जनाको मृत्यु
उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिका २ आपडाँडामा गएराती ज्यामिरे खोलामा आएको बाढीले कल्र्भट बगाउदा बसाहा—बेल्टार सडकखण्डमा सवारी आवागमन अवरुद्ध भएको छ । गएराती १२ बजे देखी अवरुद्ध बाटोमा आवागमन खुलाउने प्रयास भइरहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बेल्टारले जनाएको छ ।
ललितपुरको महांकाल गाँउपालीका ३ गोटीखेल स्थित खहरे खोलाले सडक बगाउदा मकवानपुर–ठिंगान–चापागाँउ कान्ती लोकपथमा आवागमन अवरुद्ध भएको छ ।
वि।पी। राजमार्ग अन्र्तगत, पहिरोकै कारण सिन्धुलीको गोलञ्जोर गाउपालीका ५ स्थित २६ किलोमा र सुनकोशी गाउँपालिका २ कमेरेमा एकतर्फी सवारी सञ्चालन भएको छ ।
याे पनि पढ्नुस सप्तकोशीमा पानीको तह घट्यो, प्रभावित सुरक्षित स्थानमा
यस्तै, वि।पी राजमार्गकै, काभेपलान्चोकको रोशी गाउँपालिका ११ मंगलटारमा पनि एकतर्फी सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको छ ।
रसुवाको गोसाइकुण्ड गाउँपालिका ५ तातोपानी डाँडामा गएको पहिरोका कारण स्याफ्रुवेशी—मैलुङ—बेत्रावती सडकखण्डमा पनि सवारी साधन केही दिन अगाडी देखीनै चल्न सकेका छैनन् ।
भक्तपुरको सुर्यविनायक नगरपालिका ५ चुनदेवीमा आज मोटरसाइकलको ठक्करबाट एक महिला घाइते भएकी छिन् । भक्तपुरकै च्यामासिंहकी ४१ वर्षीया मिना गुरुङलाई बा ६८ प ४२ ६० नम्बरको मोटरसाइकलले आज विहान ९ बजे ठक्कर दिएको थियो । घाइते गुरुङलाई उपचारको लागि मध्यपुर अस्पताल पठाइएको छ । ठक्कर दिने मोटरसाइकल सहित चालकलाई प्रहरी वृत जगातीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
बर्दियाको बढैयाताल गाँउपालीका ७ तिलकानामा आज बिहान मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्री घाइते भएकी छिन् । स्थानिय ५५ बर्षीया जोनारानी थारु घाइते भएकी हुन् । घाइते महिलालाई उपचारको लागी नेपालगंज तर्फ पठाइएको छ । नेपालगंजबाट गुलरिया तर्फ जादै गरेको भे५प २७ ६५ नम्बरको मोटरसाइकलको ठक्करले आज बिहान पौने १० बजे, पैदलयात्री महिलालाई ठक्कर दिएको थियो । मोटरसाइकल चालक घाइतेको उपचारमा संलग्न रहेका छन् ।
महानगरिय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले आज ७ ओटा सवारी साधन धनीलाइ हस्तान्तरण गरेको छ । विभिन्न मिति र समयमा हराएका दुइ पाङग्रे सवारी साधन खोजी गरि भेटिएका ९ ओटा मध्ये ७ ओटा धनीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । महाशाखाका निमित्त कार्यालय प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक रवि कुमार पौडेलले आज एक कार्यक्रमका बिच सवारी साधन हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । गत जेठ २० गते पनि महाशाखाले ११ ओटा सवारी साधन धनीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।